အင်တာဗျူး | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 19
Yangon Press International သြဂုတ် ၂၇၊ ၂၀၁၂ ရခိုင်အရေးအခင်း နှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံခြား ပညာရှင်တဦး၏ အမြင်-အင်တာဗျူး၊ အပိုင်း (၁) ဥာဏ်လင်း နှင့် ဇေယျာလှိုင်တွေ့မေးသည်။ “ပဋိပက္ခကအသစ်မဟုတ်ဘူး။ ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတယ်။ ပြီးတော့ ပိုဆိုးတဲ့အနေအထားထိ ရောက်သွားတယ်” Tags: ဘင်္ဂါလီ, ရခိုင် Related posts ဖြိုးသီဟချို – ရိုဟင်ဂျာအသုံးအနှုန်းကြောင့် အမေရိကန်သံရုံးကို အမျိုးသားရေး ဝါဒီတို့ ကန့်ကွက် (1) ဖြိုးသီဟချို/Myanmar Now – ရခိုင်ဒေသ တည်ငြိမ်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းကြရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း (0) ဖြိုးသီဟချို (MyanmarNow) ● မောင်တောမှ အပြန် (ခရီးသွားအက်ဆေး) (0) ငြိမ်းချမ်းအေး – လောက်ကိုင်စစ် (2)...
ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၂ Southern Weekly အွန်လိုင်းတွင် မကြာသေးမီက တရုတ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားသော ဦးအောင်သိန်းလင်း အင်တာဗျူးကြောင့် စာဖတ်သူအများအပြား အံ့အားသင့်နေကြသည်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အခြေခံဥပဒေ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး No tags for this post. Related posts No related posts.
ပြောင်းလဲလာတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ ဗီအိုအေ အင်တာဗျူး၊ US Campaign for Burma အောင်ဒင်။ ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၁၂ (Aung Din @ 2011 SF Irrawaddy Discussion Event, Bay Area) http://www.voanews.com/burmese/news/democracy-forum/burma_forum_07-15-2012-162546986.html ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ အစီအစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်စို့အရေးယူမှုတွေ ချမှတ်ထားခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အရေးယူမှုတွေကို လျှော့ပေါ့ပေးလိုက်တာကြောင့် အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခွင့်တွေ ရလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့  မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပြောင်းလဲလာတဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝါရှင်တန်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ U.S. Campaign for Burma အဖွဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်ဒင်...
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ရဲ့  တာဝန်ဝတ္တရား – media ethic
voanews.com/burmese ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၁၂ ဒီတပတ် မျက်မှောက်ရေးရာသုံးသပ်ချက် အစီအစဉ်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက် အဓိကရုဏ်း တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့  တင်ပြထုတ်လွှင့်နိုင်မှု အခြေအနေတွေကို သတင်းစာ ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်၊ ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် အတိုင်ပင်ခံ ဦးဝံသ တို့နဲ့ ဦးကျော်ဇံသာ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။ Tags: ဘင်္ဂါလီ, ရခိုင် Related posts ဖြိုးသီဟချို – ရိုဟင်ဂျာအသုံးအနှုန်းကြောင့် အမေရိကန်သံရုံးကို အမျိုးသားရေး ဝါဒီတို့ ကန့်ကွက် (1) ဖြိုးသီဟချို/Myanmar Now – ရခိုင်ဒေသ တည်ငြိမ်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းကြရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း (0) ဖြိုးသီဟချို (MyanmarNow) ● မောင်တောမှ အပြန် (ခရီးသွားအက်ဆေး) (0)...
ဗြိတိန်ပါလီမန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတဲ့မိန့်ခွန်းဇွန် ၂၂၊ ၂၀၁၂ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ၀န်ကြီးချုပ်၊ အထက်လွှတ်တော်နဲ့ အောက်လွှတ်တော် အမတ်များရှင့် – ခမ်းနားတင့်တယ်တဲ့ ဒီခန်းမကြီးမှာ စကားပြောဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီဂုဏ်ပြုမှုရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သဘောသဘာဝကိုလည်း ကျမ သတိပြုမိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စကားပြောဖို့ ခွင့်ပြုသင့်သလား ဒါမှမဟုတ် ဒီအဆောက်အအုံထဲက တခြားတနေရာမှာဘဲ ပြောခွင့်ပေးမလား ဆိုတာတောင် အစောပိုင်းက အငြင်းအခုံဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်း သိရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအတင် ဆွေးနွေးတာတွေဟာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါဟာ ပါလီမန် လွှတ်တော်ရဲ့ အလုပ်ပါပဲ။ Tags: ကချင် Related posts ရိုးပြေပြစ်အောင် – ၀ရိန်းကောင်းကြသူများ (၀တ္ထုတို) (0) နှလုံးသားတွေလှူတဲ့နေ့ (5) နှင်းဆီ … ရတု...
နှစ်ဖက်စလုံးက လူတွေမှာ ပြောစရာတွေချည်းပဲ ဦးဝင်းတင်နဲ့ စကားပြောဖြစ်သမျှ။ မိုးမခ။ ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၁၂ ဒီတပတ်မှာ ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တာတွေ ရှိတယ်။ မေးခွန်းနဲ့ အဖြေတွေကို အတိအကျ မရေးတော့ဘူး။ ဆရာ့မိတ်ဆွေ ပါတီကလူငယ်တွေ၊ စာနယ်ဇင်းက သတင်းသမားတွေနဲ့လည်း စကားပြောဖြစ်တာတွေ ရှိတယ်။ တချို့ကို မေးဖြစ်တယ်။ တချို့ကို မမေးဖြစ်ဘူး။ ကိုယ်မေးတာတွေ သူဖြေခဲ့တာ ရှိသလို၊ မိတ်ဆွေတွေ မေးခဲ့တာကိုလည်း သူဖြေခဲ့သမျှ မှတ်စုထုတ်ပြီး ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဆရာက အမြဲတမ်း တဦးတည်း သွားလာ နေထိုင်တယ်။ အခြွေအရံလည်း မရှိဘူး။ သူ့အတွက် အဖော်သဟဲလိုတယ်။ ဒါကို လူတွေက အမြဲပြောတယ်။ မေးတယ်။ ဆရာကတော့ သူ့မှာ မလိုဘူးပဲ ပြောတယ်။ သူ့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေဆီ...
by Spring Flowers on Thursday, 21 June 2012 at 01:51 · မှ မိုးမခက ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ကျမရဲ့ ဘ၀အစိတ်အပိုင်းများစွာ ပြန်ပေါင်းစပ်တဲ့နေ့ပါဘဲ………… ။ Oxford တက္ကသိုလ်ကြီးထဲက St.Hugh ကောလိပ်ကျောင်းသူဘ၀နှစ်တွေ….၊ Oxford မြို့လေးက Park Town ရပ်ကွက်မှာ မိခင်တစ်ယောက်၊ ဇနီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ နေခဲ့ရတဲ့ နှစ်တွေ …….၊ Oxford တက္ကသိုလ်ကြီးက ကျမဘက်က မဆိုင်းမတွန့် ရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့အကျယ်ချုပ်ကျနှစ်တွေ အားလုံးပါဘဲ ။ အဆိုးဝါး အခက်ခဲဆုံး အချိန်တွေမှာ Oxford ရဲ့ အမှတ်ရစရာလေးတွေနဲ့ ကျမ အားတင်းခဲ့တယ် ။ ဒီအမှတ်တရတွေဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရာမှာ လိုအပ်တဲ့ အရေးပါလှတဲ့ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေပါဘဲ ………။...
အိချယ်ရီအောင် (Myanmar Now) - အရင်တုန်းက ပညာရေးအခြေအနေမျိုးကို ပြန်ရောက်ချင်ပါတယ် (အင်တာဗျူး)
Interview with U Win Tin - သူများတွေအတွက် ဦးဝင်းတင်